မြန်မာနေ့စဉ်သတင်း: “ဖြတ်လမ်းနည်း လုပ်ကြည့်တဲ့ သဘော”
Home » အင်တာဗျူး » “ဖြတ်လမ်းနည်း လုပ်ကြည့်တဲ့ သဘော”
မေး။ ။ နိုင်ငံတကာ မှာလည်းရှိပါတယ်။ လိင်အသားပေး ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေသာ သီးသန့်ရိုက်ကူးလေ့ရှိတဲ့ မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင် ဆိုတာပေ့ါ။ ဆိုတော့ ဇွန်သဉ္ဖာ ဖန်တီးချင်တဲ့ ရှေ့လျှောက် အနုပညာပုံရိပ်က ဘယ်လို ဖြစ်မလဲ။
3 Comment Box:
သိတ်လှတဲ့ ကိုယ်လုံးပိုင်ရှင်ရဲ့ ပွင့်လင်းစကားများကို နှစ်သက်မိပါတယ် ဆက်ကြိုးစားပါ အားပေးနေပါမယ်
Phan Myat Ko said...
Please try to be the best. Keep doing what you have been doing and you need to believe in what you are doing. What you are doing is pretty right for you but might be wrong for others. Do not listen to any bad comments and rumors which can't support your carrier growth.
Thidanyo Thi said...